Daawo Safiirka Jarmalka Soomaaliya oo garan weyday calanka dalkeeda iskna ag fariisatay Calanka Midawga Yurub. - iftineducation.com
Daawo Safiirka Jarmalka Soomaaliya oo garan weyday calanka dalkeeda iskna ag fariisatay Calanka Midawga Yurub.
aadan21 / February 28, 2013
iftineducation.com – Safiirka dalka Jarmalka Soomaaliya ayaa daqiiqado kadib markii warqadaheeda aqoonsiga uu ka dugudoomay madaxweynaha Soomaaliya ayaa goobtii saxaafada loogu sheegayay in ay masuulka ugu sareeya safaadara Jarmalka ee Soomaaliya waxa ay uga habaawday calankii dalkeeda.
Waxa ay isku aadisay Calanka Midawga Yurub taas oo qasab uga dhigtay Safiirka Midawga Yurub isna in uu fariisto kursi aan calan ku aadaneyn oo loogu tala galay in ay fariisato wasiirka arimaha dibada Soomaaliya.
Daqiiqado kadib markii ay booska qaldan fadhiday Safiirka Jarmalka Soomaaliya ayaa wasiirka arimaha dibadda Soomaaliyaa waxa ay xasuusisay qaladkeeda iyada oo xilligaa kadib isku aadisay calankii ay ugu soo duushay Soomaaliya in ay ka dhex tagto.
Dalka Somaliya Beesha Caalamka Dib Ugu Soo Biiray(Tallaabo wanaagsan)
iLaQosolKa mAanTA:-Saxiib Markale Kukaadi Sarif Mahayee..